Wiil uu dhalay Max'med Mursi Madaxweynihii Masar oo geeriyooday.
Thursday September 05, 2019 - 12:28:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imanaayo dalka Masar ayaa sheegaya in uu geeriyooday wiil uu dhalay Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi kadib xanuun dhanka wadnaha ah uu si degdeg ah ugusoo booday.
Cabdallah Maxamed Murs ayaa la sheegaya inuu ku dhintay Isbitalka caafimaad Al Waaxah oo ku yaala Gobolka Al Jiizah ee dhaca koofurta Magaalada Qaahira oo ah caasimada dalka Masar.
Baraha Bulshada qeybahooda kala duwan ayaa mar qura isla dhex maray geerida ku timid Cabdalla Mursi dadkuna waxa ay kukala aragti duwanayen qaabka ay ku timid geeridiisa taas oo aad ugu ekeyd sidii uu dhawaan u dhintay Aabihii xilli uu ku sugnaa Maxkamad ku taala Magalada Qaahira.
Dhawaan ayay aheyd marki la shaaciyey in wiilkan uu dhowr jeer la kulmay xanuuno is daba jooga oo ku aaddan dhanka wadnaha, Dhakhatiirta caafimaadka ayaana sheegay, in arrinkaas ay sababtay walwalka iyo walbahaarka uu ka qaaday geerida aabihii, wax dabiici ahna ay tahay in xanuunadan ay lasoo darsaan dadka ay la soo gudboonatay murugada.
Axmed Maxamed Mursi oo ah wiilka labaad ee uu dhalay Madaxweynihii hore ee dalka Masar ayaa xaqiijiyey geerida ku timid walaalkiis Cabdallah saacada yar kadib markii la gaarsiiyay Isbitaalka caafimadka wuxuuna shegay in marka uu xanuunsanayay Walaalkiis uu ka xaynayay gaari uuna dareemayay qabatin xoog leh iyo xanuun dhanka wadnaha ah kadibna sidaas lagu gaarsiyay Isbitalka caafimadka Al Waaxa ee kuyaala gobolka Jiizah.
Mid kamida Mas'uuliyiinta ugu sarreeya nidaamka Suuriya oo geeriyooday.
Madaxda Suudaan iyo Masar oo ka niqaashay arrimaha biya xireenka Niil.
Mid Kamida Boqorradii ugu da'da weynaa Dowladaha Khaliijka oo geeriyooday.